Umhlahlandlela Wokumaketha wamahhala we-Pinterest ovela ku-Brainhost | Martech Zone
Umhlahlandlela Wokumaketha wamahhala we-Pinterest ovela ku-Brainhost
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 13, i-2012 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Abantu abavela eBrainhost bangishiyile umugqa okhuthaza umhlahlandlela wabo omusha, Ungayithuthukisa Kanjani Iwebhusayithi yakho ngePinterest futhi ngicabanga ukuthi benze umsebenzi omuhle kuyo!
Nazi izingcaphuno ezi-3 ezivela kuMhlahlandlela Ongazithola Uwusizo:
Njengamanje, iyogathi yaseChobani, iDyson vacuum cleaner, i-Etsy.com, kanye nomkhiqizo wezicathulo odumile weNike unamakhasi athandwa kakhulu ePinterest. Okwenza amakhasi noma amabhodi abo akhange kakhulu ukuthi ASISetshenziswa njengamakhasi wokuthengisa kepha kunalokho asetshenziswa izinkulumo ezibukwayo mayelana namasiko noma indlela yokuphila ethokozelwa yilabo abakhetha umkhiqizo noma insiza.
Ukuphina kuzobaluleke kakhulu lapho ihlangene nemisebenzi yokuxhumana yangempela (Isibonelo, yilabo abashiya amazwana, "repin" futhi abalandela abanye abazobona ukubuyisa okuningi kusuka emsebenzini wePinterest). Ungabi nobugovu. Njenganoma yimuphi umsebenzi womphakathi, ukukhuthaza abanye ekugcineni kuzoholela ekutheni babuyise umusa. Uma inethiwekhi ikumkhakha wakho, uzothola abangane abasha bese uqhubeka nokwakha igunya lakho nabo.
Ngemuva kwalokho kufanele uqale ukubalandela futhi wenze yonke imisebenzi ezozuzisa i-akhawunti yakho. Isibonelo, lowo mbhaki ebesikhuluma ngaye kulo mhlahlandlela angahle alandele abakhiqizi bamahhavini, abenzi bezinto zokubhaka, ababhaki kanye nabo, ababhali bezincwadi zokupheka, izinkampani zokudla, nokuningi. Noma imuphi walaba baphini bangathola ezinye zezikhonkwane zababhaki zifanelekile futhi babeke amazwana, bathande, noma baziphinde. Lokhu kuthuthukisa futhi kukhulise izethameli futhi kwandisa amathuba omgwaqo owengeziwe kuwebhusayithi noma kubhulogi.
I-Pinterest ibe nokukhula okuhle nokukhanya okuqinile. Sibhalile mayelana ukuzibandakanya ku-Pinterest, engeza a I-Pinterest Pinit Button ku-WordPress futhi wabelane ngamanye Izibalo zabantu basePinterest. Siphinde sibe nekhasi lethu elibanzi lePinterest I-Marketing Infographics.
Tags: ubuchophoPinterestumhlahlandlela we-pinterestpinterest umhlahlandlela we-marekting
Okuthunyelwe Okubhaliwe Ngokubambisana ku-WordPress
Ukubuyela emuva kukaHulumeni wase-US eCISPA
May 26, 2012 ku-3: 13 AM
Ngisebenzise i-pinterest ukwengeza isiza sami futhi umphumela wamangaza ukuthi isiza sami seqiwe kusuka ku- # 182 kuye ku- # 7 esikhathini samaviki amathathu.
Icebo lokuthi kumele iwebhusayithi yethu iphinwe futhi iphindwe ngabantu abaningi le yingxenye enzima kunazo zonke. Iningi labasebenzisi be-pinterest ngeke baphinde baphendule lapho bengafani nalokho esikuphine.
Ngenza into elula ukuyikhipha ku-fiverr futhi ngathola ukuthi isiza sami siphiniwe ngabantu abangu-75, angazi ukuthi ukwenze kanjani lokhu ukusesha ngokuthayipha i-pinterest ku-fiverr futhi uzoyithola ku-TOP. Abanye abathengisi abaningi banikela ngesevisi ye-pinterest ku-fiverr kepha kokuhlangenwe nakho kwami ​​abakwazi ukwenza iwebhusayithi yami inyuke nge-SEO. Angazi ukuthi kungani.
Izizathu zokuthi kungani iPinterest ilungele i-SEO:
1. Intshisekelo yakwaGoogle kwisiginali yezokuxhumana ngakho-ke ngeke imakwe njengezixhumanisi zepulazi.
2. Uma iwebhusayithi yethu iphiniwe inokubalwa kwama-backlinks ama-3.
3. Noma ungawusekeli umbhalo wehange (ngaphandle kwesixhumanisi se-url), kusalungele ukubeka amagama ethu abalulekile encazelweni. IGoogle izoyifunda !!
4. Udinga ukubamba izixhumanisi zezikhonkwane zakho ukuze uthole ukwanda kwewebhusayithi yakho ku-SEO.